နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Me & iPhone
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:04 PM
AMK December 2, 2010 at 6:43 PM
Ko Boyz Angry Birds Seasons လေးလဲဝယ်အုံးနော် Flick Fishingလဲမိုက်တယ် Gameကောင်းတာလေးတွေ တွေ့ ရင် ပြောအုံးနော့
Rita December 2, 2010 at 7:11 PM
MrDBA December 7, 2010 at 5:03 PM
တစ်ပုဒ်လုံးဖတ်အပြီးမှာတော့ တစ်ယောက်သောသူမဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဟိုမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့ လူဆီကနေ ခပ်တည်တည် အမွေယူထားလိုက်တယ်ဆိုတာကို သတိထားလိုက်မိတယ်။ ကျန်တာကတော့ သာမန်ကာလျှံကာလောက်ပဲ မှတ်မိလိုက်တယ်။ :P
Ko Boyz December 7, 2010 at 5:19 PM
မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ပါလား။
ပေးချင်တာ တစ်ခြား ယူသွားတာ တစ်ခြား။
ဟိုတစ်ယောက်သုံးထားတာကို သဘောကျလို့ ခပ်တည်တည် ကောက်သုံးပလိုက်ဒယ်...။ ဒါဗြဲ...။ :P
nyimuyar December 15, 2010 at 11:13 AM
Mate, my third party USB charing/data cost me 2$ including postage :D
Ko Boyz December 15, 2010 at 2:20 PM
@Nyimuyar, so your cable is still working? Mine are not working anymore. I throw all third party.